FilmLight သည် IBC2019 တွင်အရောင်အားဖြင့်စင်မြင့်ပေါ်တွင်တင်ထားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » FilmLight IBC2019 မှာအဆင့်တွင်အရောင်တင်ဆက်
FilmLight IBC2019 မှာအဆင့်တွင်အရောင်တင်ဆက်
အခမဲ့ပရိုဂရမ်ဟာသူတို့ရဲ့ယာဉ်ကိုသရုပ်ပြပြီးသွားအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များကြည့်ဖို့ သာ. ကွီးမွတျအခွင့်အလမ်းများပေးနှစ်ရက်မှတိုးချဲ့
လန်ဒန် - 13 သြဂုတ်လ 2019: ယခုနှစ်ရဲ့ IBC, FilmLight (ရပ်တည်ချက်မှာ #7.A45) 14-15 စက်တင်ဘာလ 2019 အပေါ်, အဆင့်တွင်အရောင်အခမဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲစီးရီး hosting ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ဧည့်သည်များဟာသူတို့ရဲ့ယာဉ်၏အထွတ်အထိပ်မှာ colourists နှင့်အခြားဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အတူတိုက်ရိုက်တင်ဆက်နှင့်ဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါဝင်ရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။
VFX အတွက် FilmLight BLG ဂေဟစနစ်အပေါ်တစ်ဦးအလင်းထွန်းလင်း မှစ. , colourist ၏အခန်းကဏ္ဍကိုယနေ့, အရောင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နောက်မျိုးဆက်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် tools တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် - ဤဖြစ်ရပ်သည်ခေတ်သစ်အရောင်ပြီးနှင့်ဖြန့်ဝေ၏အခွင့်အလမ်းများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများမှတဆင့်လမ်းညွှန်တက်ရောက်ကူညီပေးသည်။
"အဆင့်ပေါ်အရောင် colourists, ဒါရိုက်တာများနှင့်ရိုက်ကူးရေးအကြားအမှန်တကယ်ကမ္ဘာအပြန်အလှန်အကြောင်းကိုနားမထောင်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်း," အဲလက်စ် Gascoigne, Technicolor မှာ Colourist နှင့်ယခုနှစ်တင်ပြတစ်ဦးကဆိုသည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့စတူဒီယိုဘဏ်ဍာမှကြွလာအထူးသဖြင့်လာသောအခါ "စီမံကိန်းလပေါင်းများစွာကျော်ရာအရပျကိုယူပြီးကြီးမားသောဖန်တီးမှုအသင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက် Workflows ပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်သည် - ဒီကြီးမားတဲ့ပြပွဲနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့ခြင်းနှင့်ပိုမိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အချို့ demystify ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည် ပို့စ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဒေသများ။ "
မူလက IBC2018 နှင့် NAB2019 နှစ်ဦးစလုံးမှာတစ်ရက်ဖြစ်ရပ်အဖြစ်ဆန္ဒပြ, စင်မြင့်တွင်အရောင်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကျော်ကြားမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post အရောင်ပိုက်လိုင်းတလျှောက်လုံးအနုပညာရှင်နှင့်အတူအစည်းအဝေးများပေးနိုင်ရန်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ယခုနှစ် IBC အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နှင့်ကြော်ငြာကနေ colourists အဖြစ် DITs, အယ်ဒီတာများ, VFX အနုပညာရှင်တွေနဲ့ post-ထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးများပါဝင်သည်။
• '' Mindhunter '' ရာသီများအတွက်ထူးခြားသောကြည့် Creating 2
သူဒါရိုက်တာဒါဝိဒ်သည် Fincher နဲ့သူ့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအကြောင်းပြောသွားအဖြစ် colourist အဲရစ် Weidt join - ထိုလုပ်ငန်းအသွားအလာ defining ကနေ '' Mindhunter '' ၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားဖန်တီး။ အဲရစ်မြင်ကွင်းများဖြိုဖျက်နှင့်မာစတာရာဇဝတ်မှုသည်းထိတ်ရင်ဖို၏အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်အသေးစိတျတစျဆငျ့ကို run ပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး running ဆက်လက်ဒရာမာ, ITV Studios က '' မှ Coronation Street, '' အပေါ်•အချိန်နှင့်တပြေးညီပူးပေါင်း
Editor ကိုတွမ် Chittenden နှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုသည်ဒါဝိဒ်ဝီလျံ၏ဦးခေါင်းပြီးဆုံး, Colourist စတီဖင် Edwards ကအတူအကျိုးရှိစွာ renderless Workflows နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တိုးမြှင့်ဓာတ်ပုံများကိုတိုးတက်စေူခင်း။
•အနာဂတျကိုလိုက်ရှာ: တီဗီစီးရီးများအတွက် Creating အရောင် '' Black ကကြေးမုံ ''
Technicolor ၏ Colourist အဲလက်စ် Gascoigne အဆိုပါအပြန်အလှန်ဇာတ်လမ်းတွဲ Bandersnatch နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရာသီ5အပါအဝင်, 'Black ကကြေးမုံ' 'ဂမ်နောက်ကွယ်မှဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြသည်။
CV ကို Rao က, Hyderabad အတွက် Annapurna စတူဒီယိုမှာနည်းပညာပိုင်းမှ General Manager နှင့်အတူအိန္ဒိယရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းသို့ delve ။ ဒီဟောပြောချက်ထဲမှာ CV ကိုထိခိုက်မှုဟာရုပ်ရှင်, ': အဆိုပါနိဂုံး Baahubali 2' 'အားဖြင့်ပုံအောအဖြစ်ဂမ်များနှင့်အရောင်ဆှေးနှေးပါမညျ။
•ချိတ်တွဲတပ်ဖွဲ့များ: VFX အာူးနှင့် BLG လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူပြီးသွား
က Mathieu Leclercq, ပဲရစ်မှာ Mikros ပုံရိပ်မှာ Post-ထုတ်လုပ်မှု၏ဦးခေါင်း, မကြာသေးမီစီမံကိန်းများအပေါ်သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းတခုအဖြစ်မှ Colourist Sebastian Mingam နှင့် VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူး Franck Lambertz အားဖြင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
• post မှအစုကနေ DOP ရဲ့ဖန်တီးမှုရူပထိနျးသိမျး
နောက်ဆုံးပေါ် Luc Besson ရုပ်ရှင် '' အန်နာ '' အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့အဖြစ်တီဗီစီးရီး '' အဆိုပါအံ့ဖွယ် Mrs Maisel '' အဘယ်သူသည်ပြင်သစ်ဒစ်ဂျစ်တယ် Imaging က Technician အ Karin Feuillard ADIT, နှင့် FilmLight လုပ်ငန်းအသွားအလာအထူးကု Matthieu Straub နှင့်အတူတွေ့ဆုံ။
Multi-ပေးပို့ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်•နယူးအရောင်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဖန်တီးမှု tools များ
ထိုကဲ့သို့သော HDR အဖြစ်ထွန်းသစ်စနည်းပညာများကိုများအတွက်ပေးပို့ရိုးရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီး features တွေတစ်အိမ်ရှင်အပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်လာမည့် Baselight ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, Explore ။ FilmLight ရဲ့မာတင် Tlaskal, Daniele Siragusano နှင့်အန်ဒီ Minuth အတူ။
အဆင့်တွင်အရောင် အဆိုပါ Elicium ၏ဒုတိယကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအခန်းတစ်ခန်း D201 အတွက်နေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ်
ခန်းမ 13 နီးစပ်သူစင်တာ (ဝင်ပေါက်: D) ။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ရန်အခမဲ့ပေမယ့်နေရာကန့်သတ်ပါ၏ ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်တဲ့နေရာလုံခြုံလိုအပ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအသေးစိတ်ကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်: www.filmlight.ltd.uk/ibc2019colouronstage
Baselight ONE နှင့် TWO များအတွက် Baselight Editions အပါအဝင် - IBC2019 (အမ်စတာဒမ်, 13-17 စက်တင်ဘာလ) မှဧည့်သည်များမှာလည်း FilmLight ရဲ့ပြီးပြည့်စုံအရောင်ပိုက်လိုင်းတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော, နျူကလီးယားနဲ့ Flame, လငျးနှင့်အသစ်သောက Blackboard ဂန္ထဝင် control panel ထဲက - ရပ်တည်ချက် 7.A45 ပေါ်မှာ။
NC ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်သည် IP ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည် - မေလ 6, 2020
အဲလက်စ် Gascoigne အန်ဒီ Minuth Baselight Colorist အရောင် grade အရောင်စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ပေါ်အရောင် colourist ဖန်တီးမှုပရော်ဖက်ရှင်နယ် CV ကို Rao က Daniele Siragusano ဒါဝိဒ်သည်ဝီလျံ အဲရစ် Weidt filmlight Franck Lambertz အခမဲ့ပရိုဂရမ် ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် tools များ IBC2019 စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များ Karin Feuillard မာတင် Tlaskal က Mathieu Leclercq Matthieu Straub MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Sebastian Mingam ညှိနှိုငျးဖလှယျပှဲ စတီဖင် Edwards က Technicolor တွမ် Chittenden VFX 2019-08-13
ယခင်: Pliant Technologies ကဟန်ပြ IBC 2019 မှာနောက်ဆုံးရ CrewCom ကြိုးမဲ့ခွားစနစ်
နောက်တစ်ခု: Dejero Challenge အခြေအနေများအတွက်ချိတ်ဆက် IRONMAN သြစတြေးလျသိမ်းထားပြီး